YoYarLay - Hello Health
Hello Health RSS Feeds
Ice ဆိုတာ ဘာလဲ Ice ဆိုတိုင်း ရေခဲမဟုတ်ပါ။ methamphetamine အခဲပုံစံကို ice လို့ ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Crystal meth ၊shabu၊ crystal ၊ glass ၊shard စတဲ့ အခေါ်အဝေါ်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ Crystal meth က ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကို ထိခိုက်စေတဲ့ စိတ်ကြွမူးယစ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ မူးယစ်ခံစားမှုတာရှည်စေတတ်ပြီး စွဲလမ်းစေနိုင်စွမ်းမြင့်မားတဲ့ တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးပါ။ ကြည်လင်တဲ့ ပုံဆောင်ခဲအချောင်းလေးတွေပုံစံဖြစ်လို့ ice သို့မဟုတ် glass လို့ခေါ်တတ်ကြတဲ့ Crystal meth ဟာ အနံ့မရှိ၊ ပြာလဲ့လဲ့ သို့မဟုတ် အရောင်မရှိတတ်ပါဘူး။ ပါတီတွေ၊ ပွဲတွေမှာသုံးလေ့ရှိပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ဖန်ပြွန်ပိုက်နဲ့ရှူတတ်ကြပေမယ့် မျိုချတာ၊ ရှိုက်ရှူတာ၊ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့သုံးတတ်ကြပါတယ်။ဒါကိုသုံးလိုက်ရင် ခဏတာအတွင်းမှာပဲ စိတ်ကူးယဉ် လောကနိဗ္ဗာန်ကိုခံစားရတယ် သို့ ရောက်ရှိတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အန္တရာယ်များလွန်းပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့အပြင် […]
The post Ice လို့ခေါ်ကြတဲ့ Crystal meth appeared first on Hello Sayarwon.
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ ကျန်းမာပြီး ညီညွတ်မျှတတဲ့အစာအာဟာရကိုစားသုံးခြင်းက မိခင်လောင်းနဲ့ သန္ဓေသားကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေးကိုပဲအားထားသောက်ကြတယ် ဆိုပေမယ့်လည်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေမှာလိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်ပေါင်းစုံကို ရရှိစေဖို့ အစားအစာရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အာဟာရဓာတ်မျှတအောင်စားသုံးခြင်းက လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေရရှိနိုင်မယ့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ဖြစ်ပေမယ့် ဗီတာမင်အားဆေးတွေကလည်း အကျိုးပြုမှု၊ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားပြည့်ကျန်းမာစေတဲ့ အစာအာဟာရနေရာမှာ အားဆေးတွေနဲ့အစားထိုးလို့မရဘူးဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးအတွက် လိုအပ်တဲ့ နေ့စဉ်အာဟာရဓာတ်တွေ လုံလောက်စေဖို့သာ အထောက်အကူပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ဗီတာမင်အားဆေးတွေကို ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်တွေရဲ့အကြံပြုလမ်းညွှန် မှုနဲ့သာ သောက်သုံးသင့်တယ်ဆိုတဲ့အချက်က အရေးကြီးပါတယ်။ နှစ်ယောက်စာ စားစရာမလိုပါ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ ပုံမှန်ထက်ပိုဆာလောင်သလို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမြွှာသားသမီးရဖို့ တွေးထားရင်တောင်မှ ကလေးအတွက်ပါပေါင်းပြီး နှစ်ယောက်စာစားဖို့မလိုပါဘူး။ မနက်စာမစားရင် အဆီဓာတ်နဲ့သကြားဓာတ်မြင့်မားတဲ့အစားအစာတွေကို အဆာပြေစားမိတတ်တာကြောင့် ဒီလိုမဖြစ်ရအောင် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ မနက်စာကိုစားသုံးဖို့ကြိုးစားပါ။ အသီးအနှံနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာ ဗီတာမင်နဲ့သတ္ထုဓာတ်တွေအပြင် အစာချေဖျက်မှုကို ကောင်းစေပြီး ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို […]
The post ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်အာဟာရ ၁၀မျိုး appeared first on Hello Sayarwon.
ကလေးငယ်တွေကို အုပ်ထိန်းစောင့်ရှောက်ရတာက ခက်ခဲနိုင်တယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့အားလုံး သိထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ မိခင်ဖခင်ဖြစ်စမှာတော့ ညဘက်တွေမှာ ကလေးကိုအစာကျွေးရတာမျိုးအခက်အခဲတွေကို ပင်ပန်း ခက်ခဲတာတွေလို့မထင်ပေမယ့် ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကို အထိအခိုက်မရှိဘဲကြီးပြင်းလာစေဖို့အတွက် အရာတော်တော်များများလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုသိနားလည်လာမှဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ ကလေးငယ်တွေကို အကျင့်စာရိတ္တကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ကလေးငယ်တွေအဖြစ် ကြီးပြင်း လာစေဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့အချက်များစွာကိုလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို သိရှိနားလည်လာမှာဖြစ်ပါ တယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးငယ်ကို ဘဝတစ်လျှောက်မှာ မိမိတို့တတ်စွမ်းနိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးသောအရာတွေကိုပဲ ပေးချင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်လေးတွေကို ငယ်စဉ်အရွယ်ကတည်းကအကျင့်ကောင်းတွေကို သင်ကြား ပေးမယ်ဆိုပါက ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါ အထောက်အကူပြုပေးနိုင်မယ့် ခိုင်မာတဲ့အခြေခံ အုတ်မြစ်ကိုချပေးသလိုသဘောသက်ရောက်နေပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေကိုအကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီးကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်အဖြစ်ရှင်သန်ကြီးထွား လာဖို့အတွက် မိဘတွေအနေနဲ့ အောက်ဖော်ပြပါအချက်လေးတွေကိုလုပ်ဆောင်ကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ၁။ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ ကျေးဇူးပြုပြီးလုပ်ပေးပါလို့အကူအညီတောင်းခံမှုမျိုးကိုပြောတတ်ပါစေ မိဘက ကလေးငယ်တွေအတွက် အကောင်းဆုံးသောစံနမူနာယူစရာတွေဖြစ်တာကြောင့် ကလေးငယ်တွေထံက နေတစ်ခုခုလုပ်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီပါလားဆိုတဲ့စကားနဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါ တယ်၊ ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုပြောပေးတာမျိုးလုပ်ဆောင်ပေးပါ။ ကလေးတွေကို […]
The post ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ကြီးပြင်းလာအောင် ဘယ်လိုပျိုးထောင်မလဲ appeared first on Hello Sayarwon.
ကလေးမွေးဖွားပြီးမိခင်အတော်များများဟာ ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်ကကိုယ်အလေးချိန်ကိုပြန်ရနိုင်ဖို့ ခဏတော့ အချိန်ယူရပါတယ်။ တချို့အမျိုးသမီးတွေမှာတော့ ကလေးကိုကျွေးမွေးရတာ၊ ဂရုစိုက်နေရတာနဲ့ပဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မြင့်တက်လာခဲ့တဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကို ပြန်ကျစေပြီး ကိုယ်ရေစစ်သွားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အများစုကတော့ ကလေးမွေးဖွားပြီး ခြောက်လလောက်အထိ ကိုယ်အလေးချိန်ပြန်မကျနိုင်ကြပါဘူး။ ကိုယ်အလေးချိန်မကျသွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေ ဒါမှမဟုတ် မကျဘဲ ကိုယ်အလေးချိန်ထပ်တိုးလာတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ မှာ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်ခြေများပါတယ်။ ဒီပြဿနာတွေက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ပိုဆိုးရွားလာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေနိုင်မယ့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပိုလုပ်ပြီး ညီညွတ်မျှတတဲ့ အာဟာရပုံစံနဲ့ထိန်းသိမ်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းမှုမှာ သိပ်များတာ၊ သိပ်မြန်တာတွေကလည်း ဆိုးကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် ပုံမှန်အနေအထား ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအတွင်းမှာ ကိုယ်စားသောက်တဲ့အာဟာရတွေနဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေအပါအဝင် ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်နေကျအလုပ်တွေနဲ့ အမူအကျင့်တွေအတော်များများမှာ ပြောင်းလဲစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အများစုမှာတော့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲလာတာကြောင့် သန္ဓေသားမှာ လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေအလုံအလောက်ရရှိစေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်လနုစဉ်မှာ ကတည်းက ဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေစတင်လာပြီး မွေးဖွားကာနီးအချိန်မှာတော့ ကိုယ်အလေးချိန်ပိုများနေတတ် ပါတယ်။ဒါဟာ […]
The post ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နဲ့ ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်ပိုင်း ကိုယ်အလေးချိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်သလဲ ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ appeared first on Hello Sayarwon.
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တယ်ဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဘဝမှာစိတ်လှုပ်ရှားရဆုံးနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ စိန်ခေါ်မှုအကြုံရဆုံးကိစ္စပါပဲ။ သားဦးကိုယ်ဝန်ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရတဲ့ ဇနီးသည်အတွက် ခင်ပွန်းတစ်ယောက်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်တာကတော့ ပိုပြီးချစ်ခင်ကြင်နာပေးဖို့ပါပဲ။ ဇနီးဖြစ်သူက ကိုယ့်ကလေးကို ကိုးလကြာအောင် ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရချိန်အတွင်းမှာ ကလေးရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ်က အပြင်ကနေ စောင့်ရှောက်ကူညီပေးရမှာပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့သူ့အပေါ် စိတ်ရင်းနဲ့ စောင့်ရှောက်ဂရုစိုက်မှု ပြသပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူကြိုက်တဲ့အရာ၊ မကြိုက်တဲ့အရာတွေ၊ စိတ်စွဲလမ်းမှုတွေနဲ့ မဖြစ်စဖူးဖြစ်လာတဲ့အပြုအမူတွေကို နားလည်ပေးပါ။ ကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြစဉ်မှာ ကောင်းကောင်းတုံ့ပြန်ပါ ကိုယ်ဝန်အကြောင်းကြားရတဲ့အချိန်မှာ တအားပျော်ရွှင်ဖို့ စိတ်မရှိရင်တောင်မှ စိတ်မဝင်စားသလိုအပြုအမူမျိုး နဲ့ မတုံ့ပြန်မိပါစေနဲ့။ ဇနီးသည်စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိစေဖို့နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်းမှာ သင်ကသူ့အနားမှာရှိနေပေးဖို့ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ပေးပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်တွေ ဖတ်ပါ သူ့မှာဘယ်လိုတွေပြောင်းလဲနေသလဲဆိုတာ သင်သိလေ၊ နားလည်ပေးပြီး ဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတာ ပြင်ဆင်နိုင်လေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဲဒီစာအုပ်တွေမှာ ဖခင်လောင်းတွေအတွက် […]
The post ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဇနီးသည်ကို ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ပေးမလဲ appeared first on Hello Sayarwon.
ကလေးငယ်တွေဟာကျောင်းသွားလိုက်သင်ယူလိုက် အိမ်ပြန်လာလိုက်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေကို အလျင်အမြန် လုပ်ဆောင်နေသလိုမျိုးပဲသူတို့လေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်ကလည်း လျင်လျင်မြန်မြန်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာနေပြီး ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနေပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါအစားအသောက်ဆယ်မျိုးက ကလေးငယ်တွေရဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်စားသုံးပေးသင့်တဲ့ အစားအသောက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ငယ်ရွယ်စဉ်အရွယ်မှာ စားသောက်မှုပုံစံက ကလေးငယ်တွေရဲ့ ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးနဲ့ သိမြင်မှုစွမ်းရည်တွေတိုးတက်စေဖို့အတွက် အရမ်းကိုအရေးပါ ပါတယ်။ ဘယ်ရီသီးများ စတော်ဘယ်ရီ၊ချယ်ရီ၊ဘလူးဘယ်ရီနဲ့ဘလက်ဘယ်ရီသီးတွေမှာ အာဟာရဓာတ်တွေများစွာပါဝင်နေပြီး ကင်ဆာရောဂါကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ဗီတာမင် စီ လိုမျိုးဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေတိုးပွားအောင်လည်း လုပ်ဆောင်ပေးပါ တယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ ဘလူးဘယ်ရီနဲ့စတော်ဘယ်ရီတွေက မှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး အာဟာရဓာတ်တွေလည်းများစွာပါဝင်တဲ့အပြင် ဘယ်ရီသီးတွေရဲ့အစေ့တွေထဲမှာအိုမီဂါ- သရီးဖက်တီးအက်ဆစ် တွေလည်းကြွယ်ဝစွာပါဝင် နေပါတယ်။ ပဲအမျိုးမျိုး ပဲတွေမှာ ပရိုတင်းဓာတ်တွေ၊အမျှင်ဓာတ်၊ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်များစွာပါဝင်တာကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် စွမ်းအင်ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေရဲ့နေ့လည်စာထဲမှာပဲအမျိုးမျိုးကိုထည့်သွင်းစားသုံးပေးတာက နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်မှာ ကလေးငယ်တွေရဲ့ စွမ်းရည်နဲ့တွေးတောနိုင်စွမ်းကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။ ဗိုလ်စားပဲနဲ့ pinto ပဲတွေမှာ အခြားပဲတွေထက် အိုမီဂါ သရီးဖက်တီးအက်ဆစ်ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တယ်။ အိုမီဂါ-သရီးဖက်တီးအက်ဆစ်က […]
The post ကလေးငယ်ရဲ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးပါတဲ့အာဟာရဓာတ်များ appeared first on Hello Sayarwon.
ကလေးတွေအတွက် ရိုးရှင်းပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့ နည်းတွေနဲ့ကစားရင်းသင်ပေးတာက သူတို့ရဲ့ လေ့လာသင်ယူနိုင်စွမ်းနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို တိုးတက်စေပါတယ်။ ကျန်းမာပြီးပျော်ရွှင်တဲ့ကလေးတွေအဖြစ်တင်မကဘဲ ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်လာဖို့လည်း မိဘတွေက လိုလားကြပါတယ်။ ဒီတော့ ကလေးတွေကို အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ပဲ ဆက်ဆံပြီး စကားတတ်မြောက်မှု၊ ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းနဲ့ အိုင်ကျူစွမ်းရည်တိုးတက်စေဖို့ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်နေကျကိစ္စတွေမှာပဲ ကူညီသင်ပြ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်က အသံ၊အနံ့၊ အထိအတွေ့၊ အရသာတွေသင်ပြပေးချိန်မှာ ကလေးကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လေ့လာနေဖို့ ၊ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိသမျှတွေကို စိတ်ဝင်တစားရှိနေဖို့ က အဓိကသော့ချက်ပါ။ ကလေးကိုစကားပြောပေးပါ ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာအကြောင်း ကလေးကိုပြန်ပြောပြတာက ကလေးမှာ သူမြင်နေရတာတွေနဲ့ တွဲဖက်နားလည်နိုင်စွမ်းတိုးတက်စေပါတယ်။ စကားကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကလေးမြူသလိုပုံစံနဲ့ ပြောပေးတာက ကလေးရဲ့လေ့လာနိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်စေတယ်လို့ သုတေသနကဖော်ပြပါတယ်။ ကလေးကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခံစားစေပါ လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်း ခွေးသံကြားတဲ့အခါ “ဘာသံလဲ”လို့ကလေးကိုမေးပြီး ဒါဟာခွေးဟောင်သံ(ဝုတ်ဝုတ်) ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ကိုယ်ကပြန်ဖြေပြပေးပါ။နောက်ကြုံတိုင်း ပြောတဲ့အခါ ကလေးက မှတ်မိပြီး ဝုဝုလို့ […]
The post ကလေးတွေရဲ့သင်ယူလေ့လာမှုပိုမြန်ဆန်စေဖို့ ဘာတွေလုပ်ပေးမလဲ appeared first on Hello Sayarwon.
ကလေးငယ်ကို ဥာဏ်ရည်မြင့်မားစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာစေနိုင်မယ့် အချက်များ
ကလေးငယ်လေးများရဲ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုက သူတို့လေးတွေရဲ့ အနာဂတ်အသိဥာဏ်စွမ်းရည်တွေတိုးတက်ဖို့ အတွက် လမ်းဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့အရာဖြစ်သလို သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့စ်ိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်မှု တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်ရဲ့ ဘဝသက်တမ်း ပထမ ၅နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ ကလေးငယ်ရဲ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးငယ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှုတွေထဲက ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ ပတ်ဝန်းကျင် အနေအထားအချင်းအရာတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။ ကလေးငယ်ကို အချိန်တိုင်းမှာ ဖြစ်ပျက်တွေ့ကြုံနေရသမျှ အကြောင်းအရာအလုံးစုံကိုပြောပြပေးခြင်းဖြင့် သူတို့လေး တွေရဲ့ဘာသာစကားပြောဆိုနိုင်မှုစွမ်းရည်ကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်လေးတွေ အနေနဲ့ ဘာသာစကားပြောစွမ်းရည်မြင့်မားတဲ့ မိသားစုမှာကြီးပြင်းလာရတဲ့ကလေးငယ် တွေက စကားပြောစွမ်းရည်နိမ့်ပါးတဲ့မိသားစုမှာမွေးဖွားကြီးပြင်းလာရတဲ့ ကလေးငယ်တွေထက် အသိဥာဏ် စွမ်းရည် ၃၈ ဆလောက်ပိုမိုမြင့်မားနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ အယူအဆနဲ့သဘောတရားပိုင်းဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေဖတ်ပြပေးခြင်းဖြင့် ကလေးငယ်တွေကို မူလတန်းကြိုအရွယ်မှာ သိရှိရမယ့် အရောင်တွေ၊ပုံစံတွေ၊ရာသီဥတုတွေ၊သစ်သီး၊ ခြံမွေးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ အခြားအခြေခံကျတဲ့ အကြောင်း ချင်းရာတွေကို သိရှိနားလည်စေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.။ ကလေးငယ်ကို စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်ပြပြီး စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို သူ့ရဲ့စကားလုံးတွေ နဲ့ပြန်ပြောပြစေတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကလေးငယ်ရဲ့ မှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည်ကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သစ်သီကွင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် […]
The post ကလေးငယ်ကို ဥာဏ်ရည်မြင့်မားစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာစေနိုင်မယ့် အချက်များ appeared first on Hello Sayarwon.
အမျိုးသားတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံး facial foam နှင့် moisturizer ရွေးချယ်ခြင်း
အမျိုးသားတွေရဲ့အသားအရေ အရေပြားပိုထူတယ် – အမျိုးသားတွေရဲ့သွေးထဲမှာ testosterone ဟော်မုန်းပါဝင်မှုမြင့်မားတာကြောင့် အရေပြားအလွှာတွေပိုထူပြီး elastin နဲ့ collagen လည်း ပိုများတာကြောင့် အရေပြားကျုံ့ဆန့်နိုင်အားပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေထက် အသားအရေလျော့တွဲခြင်း၊အရေးအကြောင်း စတာတွေလို အသားအရေရင့်ရော်မှုကိုခံနိုင်ရည်ပိုရှိပါတယ်။ အဆီပိုပြန်တယ် – သူတို့ရဲ့အသားအရေမှာ အဆီထွက်တဲ့ဂလင်း(sebum) ရဲ့လှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်မှုပိုများတာကြောင့် အဆီပိုပြန်တတ်ပါတယ်။ ဒီအဆီတွေကပဲ အသားအရေကိုကာကွယ်ပေးပြီး နူးညံ့ချောမွေ့စေတာပါ။ ချွေးပေါက်ပိုကျယ်တယ် – အဆီပိုပြန်ပြီး အမွေးအမျှင်ပိုများတတ်တဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့ချွေးပေါက်တွေက ပိုကျယ်လို့ ဝက်ခြံလည်းပိုပေါက်လွယ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေက အပြင်ထွက်တာပိုများတာကြောင့်လည်း အရေပြားမှာ နေလောင်ခြင်းနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု တွေကို ပိုထိတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်ထိခိုက်လွယ်တဲ့အသားအရေကို ကာကွယ်ဖို့နဲ့ ကျန်းမာတဲ့ အသားအရေကို ထိန်းသိမ်း ဖို့ အသားအရေနှင့် ကိုက်ညီသော Cleanser နဲ့ Moisturizer တို့ကို သေချာရွေးချယ် အသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နေ့စဉ် မျက်နှာမှာ ရိတ်ရ၊ရှင်းလင်းရ တာတွေလုပ်ပြီးရင် အသားအရေမထိခိုက် မပျက်စီးရအောင် Men skincare […]
The post အမျိုးသားတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံး facial foam နှင့် moisturizer ရွေးချယ်ခြင်း appeared first on Hello Sayarwon.
မျက်နှာအသားအရေစိုပြေဝင်းလက်စေမယ့်နည်းလမ်း ၁၀ ခု
အသားအရေထိန်းသိမ်းရေးဟာ မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ယောကျာ်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ဂရုစိုက်သင့်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ အသားမဖြူရင်တောင် အသားအရေကြည်လင်ပြီး စိုပြေဝင်းလက်တဲ့အနေအထားရှိရင် အပေါ်ယံ မိတ်ကပ် အပြင်အဆင်မပါလည်း လှနိုင်ပါတယ်။ သိပ်အချောအလှလည်းမဟုတ်ဘဲ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ မျက်နှာလေးက ကြည်လင်လှပနေတဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်တွေကို တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ဖြီးလိမ်းပြင်ဆင်ထားတာမဟုတ်ဘဲ အသားအရေလှတဲ့အဆင့်ကို ရောက် နိုင်ရင်တော့ ဒီထက်ပိုလှဖို့ သိပ်ဖန်တီးစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဒီလိုလှပတဲ့ အသားအရေမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ဘယ်သူမဆို ဆန္ဒရှိကြမှာဖြစ်လို့ အသားအရေထိန်းသိမ်းရေးပစ္စည်းတွေကို နည်းလမ်းမှန်မှန်နဲ့ အသင့်တော်ဆုံးရွေးချယ်အသုံးပြုရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ကိုယ်ပေါ်မှာ အမြဲအသုံးပြုနေတဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းတွေ၊ခေါင်းလျှော်ရည်၊လိုးရှင်းတွေနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေက ကိုယ်နဲ့ဓာတ်မတည့်တာ၊ အရေပြားမှာထိခိုက်စေတာ၊ ပစ္စည်းတွေက အရည်အသွေးမမီတာတွေ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခါမျိုးတွေ ရှိတတ် ပါတယ်။ တခါတရံ မျက်နှာသစ်ဆေး၊ နေလောင်ခံခရင်မ်တွေရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကနေ ထိခိုက်မှုတွေ ရှိလာစေတတ်ပါတယ်။ ထိခိုက်လွယ်အသားအရေ (sensitive skin) ပိုင်ရှင်တွေဟာ အသားအရေထိန်းသိမ်းတဲ့ပစ္စည်းတွေ သုံးရင်းနဲ့ အရေပြားမှာလောင်တာ၊ […]
The post မျက်နှာအသားအရေစိုပြေဝင်းလက်စေမယ့်နည်းလမ်း ၁၀ ခု appeared first on Hello Sayarwon.
အုန်းဆီက အရေပြားနဲ့ အခြားသောကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို ကုသရာမှာတော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ်။ အနာကျက်စေနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ အုန်းဆီက ကလေးငယ်ရဲ့အရေပြားကို အာဟာရဓာတ်အပြည့်ဝဆုံးပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝအဆီတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အုန်းဆီမှာပါတဲ့ သေးငယ်တဲ့မော်လီကျူးလေးတွေက အရေပြားကအဆီကို အလွယ်တကူစုပ်ယူနိုင်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးသလို အဆီတွေကို ဆဲအတွင်းပိုင်းနဲ့ တွယ်ဆက်တစ်ရှုးတွေအထိရောက်ရှိစေအောင်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ အရေပြားထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကို သက်သာစေနိုင်စွမ်းရှိသလို အရေပြားရောဂါတွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အုန်းဆီစစ်စစ်ကို ကလေးငယ်တွေအတွက်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ အုန်းဆီက အနာကျက်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းလည်းရှိပါတယ်။ အရေပြားဓာတ်မတည့်ခြင်း၊ (Hay Fever) – Hay Fever ကိုသက်သာစေဖို့အတွက် နှာခေါင်းအတွင်းဘက်ထဲကို အုန်းဆီနည်းနည်းလူးပေးပါ။ ဝတ်မှုန်တွေက အုန်းဆီမှာ ပျော်ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကလေးဝက်ခြံ – ကလေးငယ်ရဲ့ ဝက်ခြံအပေါ်မှာ အုန်းဆီခပ်ပါးပါးလေး တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် မပျောက်မချင်းလူးပေးပါ။ ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာတွေ – ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာပေါ်ကို အုန်းဆီလူးပေးပါ။ ရောင်ရမ်း နီမြန်းမှုကိုလျော့ကျစေပြီး အနာကျက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရေကျောက် – အုန်းဆီက ရေကျောက်ကြောင့် ယားယံတာကိုလျော့ပါးသက်သာစေပြီး အရောင်ကျစေတဲ့အပြင် အဖျားတာမရှည်အောင်လည်းလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ပိုးကောင်နဲ့ အဆိပ်ရှိတဲ့အကောင်တွေအကိုက်ခံရတာ […]
The post ကလေးငယ်လေးတွေအတွက် အုန်းဆီရဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ appeared first on Hello Sayarwon.
ကလေးငယ်လေးတွေကို နှိပ်နယ်ပေးတာက ကလေးတွေကို အနားရစေပြီး ပိုမိုအိပ်ပျော်စေနိုင်တဲ့အပြင် အငိုလည်း နည်းစေနိုင်ပါတယ်၊ လို့ The Cochrane Library ကလေ့လာမှုတစ်ရပ်အရသိရပါတယ်။ မွေးကင်းစကလေးငယ်လေးတွေကို နှိပ်နယ်ပေးတာက မိခင် နဲ့ ကလေးတို့ကြားက အပြန်အလှန်နားလည်မှုရရှိစနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင် ကလေးရဲ့အိပ်စက်မှုပိုင်းမှာလည်း အထောက်အကူပြုပြီး ကလေးငိုတာကိုလည်း သက်သာစေတဲ့အပြင် ကလေးတွေကိုနှိပ်နယ်ပေးတာက စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်တာကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။ ဥပမာပြောပြရရင် ကလေးငယ်လေးတွေကို နှိပ်နယ်ပေးတာက စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေတဲ့ ဟော်မုန်းကြောင့် ကလေးငယ်တွေမှာ ဆီးခဏခဏသါားတာမျိုးကိုသက်သာလျော့ပါးစေပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအတွင်း ကလေးကိုအချိန်ဘယ်လောက်ကြာအောင်နှိပ်ပေးတာ နဲ့ ဘယ်လ်ုနှိပ်ပေးတာကကောင်းလဲဆိုတာတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ကလေးငယ်လေးတွေကို နှိပ်နယ်ပေးတာက ကလေးငယ်ရဲ့ကြီးထွားမှုကိုထိခိုက်မှုမရှိစေသလို အန္တရာယ်ရှိစေတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူး၊ လို့သိရှိရပါတယ်။ ကလေးငယ်လေးတွေကို နှိပ်နယ်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ်လေ့လာမှုတွေလုပ်ဆောင်ကြည့်ဖိုတော့လိုအပ်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ ကလေးငယ်ကိုနှိပ်နယ်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံးဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။ ကလေးငယ်လေးတွေကို ဆီတစ်မျိုးမျိုးသုံးပြီး နှိပ်နယ်ပေးတာက အရမ်းကိုအရေးကြီးပါတယ်။ ကလေးငယ်လေးတွေကို နှိပ်နယ်ပေးတဲ့နေရာမှာ အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုက မှန်ကန်တဲ့ဆီရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ညင်ညင်သာသာနှိပ်နယ်ပေးတာက ကလးငယ်ကိုစိတ်ခံစားမှုကောင်းမွန်စေပြီး ကလေးငယ်ရဲ့အရေပြားအတွက်လိုအပ်တဲ့ […]
The post ကလေးငယ်တွေကို နှိပ်နယ်ပေးခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူများ appeared first on Hello Sayarwon.
ဦးခေါင်းထိခိုက်မှုတော်တော်များများဟာ အထူးစောင့်ကြည်ဖို့ သို့မဟုတ် အရေးပေါ်ဆေးရုံတင်ဖို့လိုအပ်လောက်တဲ့ အထိ မပြင်းထန်တတ်ကြပါဘူး။ သို့ပေမယ့် သိပ်မပြင်းထန်တဲ့ဦးခေါင်းထိခိုက်မှုတွေကနေတောင် နာတာရှည်ခေါင်းကိုက်ခြင်းတွေ သို့မဟုတ် အာရုံစူးစိုက်မှုခဲယဉ်းတာတွေအထိ ဖြစ်လာနိုင်ပြီး လုံးဝပုံမှန်အနေအထားအကောင်းပကတိပြန်ဖြစ်နိုင်ဖို့ အချိန်အတော်အတန်ကြာ အနားယူဖို့လိုအပ်နိုင်သေးပါတယ်။ ဦးခေါင်းထိခိုက်ထားပြီး အောက်ပါ ရောဂါလက္ခဏာတွေပြလာပြီဆိုရင် အန္တရာယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် အရေးပေါ်ဌာနသို့ဖုန်းဆက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးရုံကားခေါ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ လူကြီး ခေါင်း သို့ မျက်နာတွင် အလွမ်အမင်းသွေးထွက်နေခြင်း နှာခေါင်းပေါက် သို့ နားပေါက်များမှ သွေးများ သို့ အရည်များ ယိုစီးကျနေခြင်း ဆိုးရွားစွာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း စက္ကန့်အနည်းငယ်ထက်မနည်း သတိလွတ်ခြင်း မျက်စိအောက် သို့ နားအနောက်ဘက်ခြမ်းမှာ မဲလိုက်၊ပြာလိုက်နဲ့ အရောင်ပြောင်းခြင်း အသက်ရှူရပ်တန့်သွားခြင်း စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း ဟန်ချက်မထိန်းနိုင်ခြင်း လက်တစ်ဖက် သို့ ခြေတစ်ဖက် အားနည်းခြင်း သို့ လှုပ်မရခြင်း မျက်စိသူငယ်အိမ်အရွယ်အစားမညီခြင်း […]
The post ဦးခေါင်းထိခိုက်ခြင်း – အရေးပေါ်ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ appeared first on Hello Sayarwon.
သင့်ကလေးကိုပိုးမွှား၊ အင်းဆက်တွေကိုက်ခံရရင် ကလေးတွေဟာ ပုရွက်ဆိတ်၊ခြင်၊ကြမ်းပိုး၊နကျယ်၊ ပျား၊ကင်း၊နဲ့ ပင့်ကူတို့လို အင်းဆက်အမျိုးမျိုးအကိုက်ခံရတတ်ပါတယ်။ ပျားတုပ်တာ၊ပိုးမွှားကိုက်တာတွေက ခံရခက်ပြီး နာကျင်ရပေမယ့် အန္တရာယ်ဖြစ်ခဲပါတယ်။ နာကျင်မှုက နောက်တစ်နေ့မှာ လျော့ပါးသွားတတ်ပြီး လုံးဝပျောက်သွားတာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးကို ပါးစပ်၊ သို့မဟုတ် လည်ပင်းကို ပျားတုပ်ခံရရင် ဒါမှမဟုတ် အကိုက်ခံရလို့ ပြင်းထန်တဲ့ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်လာရင် ချက်ချင်းကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။ ကလေးငယ်လေးတွေဟာ အင်းဆက်၊ပိုးမွှားတွေရဲ့၊ အထူးသဖြင့် ခြင်တွေရဲ့ ပစ်မှတ်ထားခံရတာများပါတယ်။အကောင်ကိုက်မခံရအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ၊ကလေးကိုအမြဲသတိထားစောင့်ကြည့်နေမှာလား။ ဒါတောင်မှ ခြင်ဆိုတာ အနားမှာအမြဲရှိနေတတ်ပါတယ်။ အကောင်ကိုက်ခံရ၇င်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ၊ ဘာတွေသတိထားသင့်သလဲဆိုတာသေချာသိထားရင်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။ ခြင်ကိုက်ခံရရင် ခြင်ကိုက်ခံရတဲ့အခါ ခြင်ဖုတွေက နီရဲပြီးယားလာပါတယ်။ ခြင်တွေက ငှက်ဖျား၊သွေးလွန်တုပ်ကွေး၊ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ၊ yellow fever ရောဂါ၊ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ (meningitis )၊တို့လို ပြင်းထန်တဲ့ရောဂါတွေလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သန်းကိုက်ခံရရင် ကြောင်သန်း၊ခွေးသန်းတွေကိုက်ခံရရင် ယားယံတဲ့အဖုလေးတွေ။ တခါတရံနာကျင်တဲ့အဖုတွေဖြစ်လာစေပါတယ်။ ဒီအဖုတွေက စုပြီးအပိန့်လိုထွက်လေ့ရှိပြီး နာရီအနည်းငယ်ကနေ တစ်ရက်လောက်အထိ မပျောက်ဘဲရှိနိုင်ပါတယ်။ ကြမ်းပိုးကိုက်ခံရရင် ကြမ်းပိုးကိုက်ခံရတဲ့လက္ခဏာက ခြင်ကိုက်ခံရတဲ့ဝေဒနာနဲ့ဆင်တူပါတယ်။ ကလေးမှာ နီရဲပြီးဖောင်းလာတဲ့ ယားယံတဲ့အဖုလေးတွေ ဖြစ်လာတတ်ပြီး အများစုက […]
The post ပိုးမွှားကိုက်ခံရတဲ့ကလေးမှာဖြစ်တဲ့ အရေပြားပြဿနာ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ appeared first on Hello Sayarwon.
အခုခေတ်မှာ အိုင်တီခေတ်ဖြစ်တာကြောင့် ကြီးငယ်မရွေး လူတိုင်းနီးပါးမှာ စမတ်ဖုန်းရှိနေကြပါပြီ။ လူငယ်အတော်များများမှာလည်း အလုပ်သဘောအရ၊ ကျောင်းပညာရေးအရ လပ်တော့ကွန်ပျူတာတွေလည်း အသုံးများနေကြပြီ၊ သွားရင်းလာရင်း တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာ၊ iPad စတာတွေနဲ့ စာဖတ်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာ နှစ်မျိုးရှိနေပြီဆိုရင်ပဲ သင်ဟာ အိပ်ချိန်ထက် ဒါတွေသုံးတဲ့အချိန်ပိုများနေမယ်ဆိုတာ သေချာသလောက်ရှိနေပါတယ်။ တီဗီ ကြည့်ချိန်တောင် ထည့်တွက်စရာမလိုပါဘူး။ အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကြားမှာ ကွန်ပျူတာနဲ့တခြားအီလက်ထရောနစ်တွေ အသုံးများလာတာနဲ့အမျှ သူတို့ကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်တွေအကြောင်းကို ထည့်စဉ်းစားမိတာ နည်းလာပါတယ်။ မကြာသေးခင်က Ofcom ရဲ့ လေ့လာမှုစစ်တမ်းတစ်ခုအရ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေဟာ တစ်နေ့တာ ၂၄ နာရီအတွင်းမှာ ပျမ်းမျှတွက်ချက်ထားတဲ့ အိပ်ချိန် ၈ နာရီ ၂၁ မိနစ်နဲ့ယှဉ်ရင် မီဒီယာ သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေးတစ်ခုခုကို အသုံးပြုနေတဲ့အချိန်က ပျမ်းမျှအားဖြင့် စုစုပေါင်း ၈နာရီ ၄၁ မိနစ် ရှိနေတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ […]
The post အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေကြောင့် အသက်တိုစေမှာလား appeared first on Hello Sayarwon.
အခုခေတ်မှာ အိမ်ရှင်မတွေအနေနဲ့ ဆီကုန်သက်သာပြီးအိုးမကပ်တဲ့ ဒယ်အိုးတွေ၊ဟင်းချက်အိုးတွေအပြင် သတ္တုအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးနဲ့ထုတတ်ထားတဲ့ အကင်အိုး၊ပေါင်းအိုးတွေကိုပါ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုလာကြပြီး ရွေးချယ်စရာအမျိုးအစာတွေကလည်း စုံလင်လှပါတယ်။ အမြင်လှအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အိုးလေးတွေက မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ မိသားစုဝင်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအပေါ်မှာ ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်နေသလဲဆိုတာကိုတော့ သေသေချာချာသိရှိတဲ့သူက ရှားမယ်ထင်ပါတယ်။ တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်နဲ့အညီ အပြိုင်အဆိုင်တီထွင်ထုတ်လုပ်လာတဲ့ အိုးလေးတွေရဲ့ နောက်ကွယ်က ကျွန်မအပါအဝင် အိမ်ရှင်မတော်တော်များများသတိမထားမိသေးတဲ့ သတိပြုစရာအချက်လေးတွေကို သိရှိနိုင်စေဖို့ လက်လှမ်းမီသမျှ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအပေါ်မှာ နေ့စဉ်စားသောက်လိုက်တဲ့အစားအသောက်တွေက တော်တေ်ာလေးကိုလွှမ်းမိုးထားပါတယ်။ အစားအသောက်တွေရဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေက အပူချိန်အလါန်အကျွံပေးမှုကြောင့် အလွယ်တကူပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။ ချက်ပြုတ်အပူပေးတဲ့ အခါမှာ အသုံးပြုတဲ့ အိုးတွေမှာပါတဲ့ ဓာတ်သတ္တုတွေက အစားအသောက်တွေထဲ စိမ်ပဝင်သွားတာမျိုးတွေကြောင့်လည်း အစားအသောက်တွေရဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။ ချက်ပြုတ်ရာမှာ သုံးတဲ့အိုးတွေမှာာကိုယ်အတွင်းပါတဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေက အစားအသောက်တွေထဲမှာပါတဲ့အင်ဇိုင်းတွေ နဲ့ အစားအသောက်တွေရဲ့ အရသာကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သလို ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲအထိရောက်ရှိသွားပါတယ်။ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲက အချို့က အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့ အငွေ့တွေထွက်ပေါ်စေနိုင်သလို အစားအသောက်တွေကနေတင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းထဲကို […]
The post မီးဖိုချောင်ထဲက သင်မသိသေးတဲ့အန္တရာယ် appeared first on Hello Sayarwon.
Baking Soda (မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ သို့မဟုတ် စားဆိုဒါ) sodium bicarbonate ဖြစ်တဲ့ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါက အသားအရေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ချိုးမယ့်ရေထဲမှာ နည်းနည်းလောက်ထည့်လိုက်ရုံနဲ့ ခြောက်သွေ့ပြီးအရေခွံကွာတဲ့အသားအရေ၊နဲ့ ယားယံတတ်တဲ့အသားအရေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကိုရေနဲ့ရောပြီးအသုံးပြုရင် အသားအရေကို ဆဲလ်သေဖယ်ရှားသန့်စင်နိုင်၊ အသားမာတွေကို ပျော့ပျောင်းစေနိုင်၊ရောင်ရမ်းနေတဲ့ အသားအရေကိုသန့်စင်စေနိုင်ပါတယ်။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါက သဘာဝချွေးနံ့ပျောက်ဆေးအဖြစ်လည်း အသုံးဝင်ပါသေးတယ်။ အသားအရေအလှအပအတွက် မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါရဲ့ အကျိုးကျေးဇူး (၁) ခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရေ သင့်ရဲ့အသားအရေက ခြောက်သွေ့ပြီး အရေခွံတွေကွာထွက်တတ်တယ်ဆိုရင် ရေချိုးတိုင်း မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနည်းနည်းသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အသားအရေခြောက်သွေ့ကွာထွက်တတ်တဲ့ အရေပြားရောဂါအတွက် ကုထုံးတစ်ခုအဖြစ်တောင် ပညာရှင်တချို့က ညွှန်းပေးတတ်ပါတယ်။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါက ရေရဲ့ pH ပမာဏကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ အရေခွံကွာလွန်းတဲ့အသားအရေ ရှိသူတွေအတွက် မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါထည့်ထားတဲ့ရေချိုးကန်ထဲမှာ မိနစ် ၃၀ ကနေ ၆၀ လောက်အထိ စိမ်ပေးတာမျိုးကို တစ်ပတ် သုံးကြိမ်လောက် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ အစိုဓာတ်ထိန်း moisturizer […]
The post အလှအပအတွက် မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ ၁၃ ချက် appeared first on Hello Sayarwon.
Neurofibromatosis ဆိုတာ Neurofibromatosis ဆိုတာ မျိုးရိုးလိုက်တဲ့အာရုံကြောစနစ် ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဝေဒနာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် ဒီရောဂါက ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှုနဲ့ အာရုံကြောဆဲလ်တစ်ရှုးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒီရောဂါကို neurofibromatosis type 1 (NF1) and neurofibromatosistype2(NF2) နဲ့ ရှားပါးတဲ့ neurofibromatosis ရောဂါတစ်မျိုးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီရောဂါအကြောင်းကိုတော့ လူသိပ်မသိကြပါဘူး။ neurofibromatosis type 1 (NF1) ကအဖြစ်များပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာများ neurofibromatosis ရောဂါ မျိုးရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူး။ Neurofibromatosis 1 Neurofibromatosis 1 (NF1) ကများသောအားဖြင့် မွေးကတည်းက (သို့) မွေဒပြီးသိပ်မကြာခင်ကာလမှာကတည်းကပေါ်လာတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ မွေးကင်းစအရွယ်ကနေ အသက် ၁၀ နှစ်အတွင်းမှာ ရောဂါလက္ခဏာတွေပေါ်လာတတ်ပပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေအနေနဲ့ကတော့ အရေပြားပေါ်မှာ ကော်ဖီရောင် အစက်အပြောက်လေးတွေထွက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုမှာ အဆိုပါလက္ခဏာလိုမျိုးအရေပြားပေါ်မှာ အညိုရောင်ဖျော့ဖျော့ အစက်အပြောက်လေးတွေထွက်ပေါ်တတ်ပြီး အန္တရာယ်တော့မရှိပါဘူး။ မွေးကတည်းကအရေပြားပေးမှာ အစက်အပြောက်တွေပါလာတတ်သလို မွေးပြီးတစ်နှစ်အတွင်းမှာလည်းပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ နာက်ပိုင်းမှာ အမြဲတမ်းလိုလို အရေပြားပေါ်မှာ အစက်အပြောက်လေးတွေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ အညိုရောင်အစက်အပြောက်တွေက […]
The post Neurofibromatosis (အာရုံကြောတစ်ရှူးများတွင် အလုံးအကျိတ်ဖြစ်သော မျိုးရိုးဗီဇရောဂါ) appeared first on Hello Sayarwon.
နှုတ်ခမ်းနီတွေက လူကိုပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိသွားစေနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် နှုတ်ခမ်းနီ အများစုမှာ ခဲဓာတ်၊cadmium၊ chromium၊ aluminum နဲ့ အခြားအဆိပ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်း ၅ မျိုးပါဝင်နေတယ်၊လို့ ကယ်လ်လီဖိုးနီးယားက သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာမှုအရသိရပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းနီက အမျိုးသမီးအများစုအတွက် အရမ်းကိုအရေးပါလှတဲ့ အလှကုန်တစ်မျိုးဖြစ်သလို အနှစ်သက်ဆုံး အလှပြင်ပစ္စည်း တစ်မျိုးလို့ဆိုလို့ရပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းနီ တော်တော်များများ ခဲဓာတ်တွေပါဝင်နေပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရမ်းအန္တရာယ်များသလို ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိစေနိုင်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းနီကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပျိုမေတွေအနေနဲ့ အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ လှပနိုင်စေဖို့အတွက် သိထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို လက်လှမ်းမီသလောက် စုဆောင်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းနီမှာပါတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေက ခန္ဓာကိုယ်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ခြင်း နှုတ်ခမ်းနီတွေကို တာရှည်အထားခံအောင် အသုံးပြုထားတဲ့ ဖော်မယ်လ်ဒီဟိုက် နဲ့ parabens လိုမျိုးဓာတုပစ္စည်းတွေက မျက်လုံးတွေကို ကျိန်းစပ်စေတာ၊ ချောင်းဆိုးတာ နဲ့ အရေပြားမှာ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်တာမျိုးတွေခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ ခဲဓာတ်က အာရုံကြောစနစ်ကို ပျက်စီးစေနိုင်ခြင်း နှုတ်ခမ်းနီတော်တော်များများမှာ ခဲဓာတ်က […]
The post နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေ သိထားသင့်တဲ့အချက်လေးများ appeared first on Hello Sayarwon.
ကော်ဖီဖျော်ပြီးရင် ကျန်တဲ့အမှုန့်အနှစ်တွေကို ချက်ချင်းလွှင့်ပစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သုံးပြီးသားကော်ဖီအနည်တွေက စွယ်စုံအသုံးဝင်တာကိုတော့ သိပ်မသိကြပါဘူး။ ကော်ဖီအနည်တွေကို အိမ်အလုပ်တော်တော်များများမှာ စရိတ်မကုန်ဘဲအသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ကော်ဖီသောက်ပြီးရင် ကျန်တဲ့အနည်တွေကို အလှအပအတွက် အသုံးချလို့ရသလို ဆံပင်အတွက်လည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။ ကော်ဖီကိုနေ့စဉ်သောက်ရင် အသက်ရှည်နိုင်တယ်၊ လေဖြတ်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်တယ်၊ အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါအန္တရာယ် ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့တောင် လေ့လာမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် သောက်ပြီးကျန်ရှိတဲ့အနည်တွေဟာလည်း ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း(recycle) သဘောနဲ့ စွယ်စုံအသုံးချလို့ရနိုင်ပါတယ်။ မြေသြဇာအဖြစ်သုံးမယ် azaleas ပန်း၊ hydrangeas (ခြောက်လပန်း)၊rhododendrons(တောင်ဇလပ်ပန်း)၊camellias ပန်း၊ နှင်းဆီပန်း တို့လို အပင်တွေစိုက်တဲ့အခါ ကော်ဖီကို မြေသြဇာအဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးချနိုင်ပါတယ်။ ကော်ဖီအနည်တွေကို အက်စစ်ဓာတ်ပြယ်စေဖို့ မြက်ခြောက်၊ကောက်ရိုး၊ အရွက်ကြွေတွေနဲ့ရောပြီးမှ အပင်ပတ်လည်မှာ ဖြန့်ထားပါ။ ကော်ဖီအနည်တွေက မြေဆီလွှာကို နိုက်ထရိုဂျင်နဲ့ပိုတက်စီယမ်ဓာတ်အပြင် အပင်တွေရှင်သန်ဖြစ်ထွန်းဖို့လိုအပ်တဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကော်ဖီမြေသြဇာက ဖော့စ်ဖရိတ်နဲ့ ကယ်လ်စီယမ်မပါတာကြောင့် အသီးအတွက် အားပေးနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကော်ဖီမြေသြဇာကိုရရှိဖို့အတွက် သံပရာ သို့မဟုတ် ပြာ အနည်းငယ်ရောစပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ပိုးသတ်ဆေး အပင်တွေမှာ ပုရွက်ဆိတ်၊ခရု၊ပက်ကျိ စတဲ့ အဖျက်ပိုးကောင်တွေကို […]
The post သုံးပြီးသားကော်ဖီအနှစ်တွေကို အသုံးချနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကောင်းများ appeared first on Hello Sayarwon.
Lu Mo	Knowledge
အရေပြားဖောက်ထွင်း အလှဆင်ပြီးနောက် ဂရုစိုက်ရမည့်အချက်များ
Zin Yamin	Health
Lu Mo	International
Copyright © 2017 YoYarLay. All Rights Reserved.